IObit Malware Fighter Pro 6.0 ( Free License Giveaway ) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home AntiMalware Antivirus Computer software Giveaway IObit Malware Fighter Pro 6.0 ( Free License Giveaway )
IObit Malware Fighter Pro 6.0 ( Free License Giveaway )
Maung Pauk at 9:02:00 PM AntiMalware, Antivirus, Computer software, Giveaway,
IObit Malware Fighter ဟာ malware နဲ့ spyware တွေကို အဓိကထား ကာကွယ်ဖျက်ထုတ်ပေးတဲ့ Software ဖြစ်ပါတယ်.်. Bitdefender ရဲ့ Antivirus Engine အထောက်အပံ့ပေးထားတဲ့ IObit anti-malware engine နဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီး ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲက Malware နဲ့ Spyware တွေကို ရှာဖွေဖေါ်ထုတ် တိုက်ဖျက်ပေးမှာပါ.. USB Stick တွေ၊ Ads Script တွေကတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်တဲ့ Virus အမျိုးအနွယ်ဝင် အန္တရာယ်ရှိတဲ့ Program တွေကို အလျှင်အမြန်ဆုံး ကာကွယ်ဖျက်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်..
Pro Version နဲ့ Free Version ရဲ့ ကွာခြားချက်ကို အောက်ကလင့်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်..
1. အောက်ကလင့်မှာ Setup ဖိုင်ကိုဒေါင်းပါ..
2. အောက်က ကီးကိုအသုံးပြုပြီး 19.95 ဒေါ်လာတန် IObit Malware Fighter Pro 6.0 ကို ၁ နှစ်စာ တရားဝင်လိုင်စင်ကီးနဲ့ အလကားသုံးနိုင်ပါပြီ.
License Code: 9B565-32EED-F0E80-51764
IObit Malware Fighter ဟာ malware နဲ့ spyware တှကေို အဓိကထား ကာကှယျဖကျြထုတျပေးတဲ့ Software ဖွဈပါတယျ.ျ. Bitdefender ရဲ့ Antivirus Engine အထောကျအပံ့ပေးထားတဲ့ IObit anti-malware engine နဲ့ တိုကျဆိုငျစဈဆေးပွီး ကိုယျ့ကှနျပြူတာထဲက Malware နဲ့ Spyware တှကေို ရှာဖှဖေျေါထုတျ တိုကျဖကျြပေးမှာပါ.. USB Stick တှေ၊ Ads Script တှကေတဈဆငျ့ ကူးစကျနိုငျတဲ့ Virus အမြိုးအနှယျဝငျ အန်တရာယျရှိတဲ့ Program တှကေို အလြှငျအမွနျဆုံး ကာကှယျဖကျြထုတျပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ..
Pro Version နဲ့ Free Version ရဲ့ ကှာခွားခကျြကို အောကျကလငျ့မှာ ကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျ..
1. အောကျကလငျ့မှာ Setup ဖိုငျကိုဒေါငျးပါ..
2. အောကျက ကီးကိုအသုံးပွုပွီး 19.95 ဒျေါလာတနျ IObit Malware Fighter Pro 6.0 ကို ၁ နှဈစာ တရားဝငျလိုငျစငျကီးနဲ့ အလကားသုံးနိုငျပါပွီ.
AntiMalware, Antivirus, Computer software, Giveaway
AntiMalware Antivirus Computer software Giveaway